Ankara Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak – RayHaber | raillynews
[15 / 01 / 2020] ၀ န်ကြီးဌာနမှအင်စတီကျူ့ -“ Istanbul သည်စမတ်မြို့အသုံးချမှုတွင်ပထမဆုံးနမူနာရုပ်သံလိုင်းဖြစ်သည်”	06 တူရကီ
[15 / 01 / 2020] စမတ်မြို့ကြီးများနှင့်မြူနီစီပယ်ကွန်ဂရက်မှာ Istanbul Polemics Channel	06 တူရကီ
[15 / 01 / 2020] စမတ်မြို့ကြီးများနှင့်မြူနီစီပယ်ကွန်ဂရက်အင်ကာရာတွင်စတင်ခဲ့သည်	06 တူရကီ
[15 / 01 / 2020] Altunizade Metrobus ဘူတာကိုချဲ့ထွင်ခဲ့သည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[15 / 01 / 2020] Uludağဆောင်းရာသီသည်ဒီနှစ်အတွက်ရောင်စုံမြင်ကွင်းဖြစ်သည်	16 Bursa
13 / 12 / 2019 ဂျော့ဘ်, အထွေထွေ
2547 နည်းပြနှင့်သုတေသနလက်ထောက်အားဥပဒေအမှတ် 12 နှင့်ဗဟိုစာမေးပွဲများနှင့်ချိန်းဆိုမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ပါ ၀ င်သည့်ဥပဒေများနှင့်အညီ Ankara တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခအဖွဲ့၏ဌာနခွဲများကိုကျောင်း ၀ န်ထမ်းများ မှလွဲ၍ အခြားရွေးချယ်စရာများနှင့်အညီခန့်အပ်လိမ့်မည်။
1-အသနားခံလွှာ (လျှောက်လွှာတင်ခြင်း၊ ဌာန၊ ဌာန၊ ရာထူး၊ ဘွဲ့နှင့်လျှောက်ထားသူ၏ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာများ (လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ်စသည်) ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။
2 - အထောက်အထားကတ်ပြားမိတ္တူ၊
4 - ဒီပလိုမာ၊ ယာယီဘွဲ့လက်မှတ်နှင့်ဘွဲ့ရကျောင်းသားလက်မှတ်များ၏မိတ္တူများ (နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှဘွဲ့ရများ၏ဒီပလိုမာများကို Interuniversity ဘုတ်အဖွဲ့၏တူညီမှုကိုပြသသည့်စာရွက်စာတမ်း)
5-License Transcript (အတည်ပြုစာရွက်စာတမ်း) (4 နှင့်5အဆင့်သတ်မှတ်သည့်စနစ်၏ပြောင်းလဲခြင်းဇယားသည်YÖKမှသတ်မှတ်ထားသောပြောင်းလဲခြင်းဇယားပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ )
8 - နိုင်ငံခြားဘာသာစကားလက်မှတ်
9 - အတွေ့အကြုံလက်မှတ် (ကြေငြာထားသည့်ဝန်ထမ်းပေါ် မူတည်၍ ရလိမ့်မည်) (အတည်ပြုစာရွက်စာတမ်း)
တရား ၀ င်မှတ်တမ်းမရှိကြောင်း X-NUMX-Document (e-Government မှတဆင့်ရရှိသောစာရွက်စာတမ်း)
ကြေငြာချက်စတင်သည့်နေ့ရက် - 13.12.2019
လျှောက်လွှာနောက်ဆုံးနေ့ - 27.12.2019
Pre- အကဲဖြတ်နေ့စွဲ: 09.01.2020
1- လျှောက်လွှာကို ၀ န်ထမ်းများကြေညာသည့်ယူနစ်သို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ စာဖြင့်ဖြစ်စေပြုလုပ်ရမည်။
2-results သည် ၀ န်ထမ်းများကြေငြာသည့်ယူနစ်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်ထုတ်ဝေလိမ့်မည်။
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏အက်ဥပဒေအမှတ်3၏ 657-48 ။ သူတို့ကအားလုံးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရပေမည်။
4- ကြေငြာချက်တွင်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလအတွင်း၌တင်ပို့ခြင်းနှင့်လျှောက်လွှာတင်ခြင်းနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းများမပြည့်စုံသောလျှောက်လွှာများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ စာတိုက်မှလျှောက်လွှာများကိုနောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်အထိဌာနမှူး / ညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနသို့ဆက်သွယ်ရမည်။ (စာတိုက်နောက်ကျခြင်းအတွက်တက္ကသိုလ်သည်တာ ၀ န်မရှိပါ။ )
5 - တောင်းဆိုထားသောစာရွက်စာတမ်းများတွင်မှားယွင်းသောဖော်ပြချက်များတွေ့ရှိခဲ့သူများသည်မမှန်ကန်ပါဟုသတ်မှတ်ခံရပြီးခန့်အပ်ခြင်းခံရမည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ကိုခန့်ထားရင်တောင်မှပယ်ဖျက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးဘယ်အခွင့်အရေးကိုမှတောင်းဆိုလို့မရပါဘူး။
6 - အတည်ပြုထားသောစာရွက်စာတမ်းများကို Notary Public သို့မဟုတ် Official Institution များမှအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။
7 - သုတေသနလက်ထောက်များကိုဥပဒေပုဒ်မ 2547 ၏အပိုဒ် ()) အရခန့်အပ်လိမ့်မည်။
8- သုတေသနလက်ထောက်များသည်အနုပညာကျောင်းသားဘွဲ့၊ ပါရဂူဘွဲ့သို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ လျှောက်ထားသူသည်အများဆုံးပညာသင်ကာလ (ဘွဲ့ရ) ထက်မပိုစေရ။
- 06.02.2013 ၏တရားဝင်ပြန်တမ်းတွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည့်ဘွဲ့လွန်ပညာရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းတွင်သတ်မှတ်ထားသောအများဆုံးကာလပြီးဆုံးသွားသောကျောင်းသားများ၊ သို့သော်အမြင့်ဆုံးကာလကို 2016-2017 ပညာရေး၏ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်ပြန်လည်စတင်ခဲ့သည်။
- 20.04.2016 Fall semester ဆောင်း ဦး ရာသီအထိဘွဲ့လွန်ပညာရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ထုတ်ဝေခဲ့သော 2017 ရက်စွဲမှအမြင့်ဆုံးပညာရေးကာလကုန်ဆုံးသောကြောင့် ၀ န်ထမ်းများမှထုတ်ပယ်ခံရသောသုတေသနလက်ထောက်များသည် 2016 ဆောင်း ဦး ရာသီအမြင့်ဆုံးပညာသင်နှစ် ပြန်လည်စတင်၍ သုတေသနလက်ထောက်ဝန်ထမ်းများသို့လျှောက်ထားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
9 - ဥပဒေအမှတ် 2547 ဆောင်းပါးအရသိပ္ပံနည်းကျဝန်ထမ်းများကိုခန့်အပ်လိမ့်မည်။
10 - အကယ်၍ ကန်ထရိုက်တာကသင့်လျော်သည်ဟုယူဆပါကကြေငြာချက်၏အဆင့်တိုင်းကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
11-ကြှနျုပျတို့ကိုကြော်ငြာ http://www.ankara.edu.tr/ ဒါဟာလိပ်စာမှာရောက်ရှိစေနိုင်သည်။
Hakkari တက္ကသိုလ်မှပညာရေး ၀ န်ထမ်းများခန့်အပ်မည် (2 Personnel)
Hakkari တက္ကသိုလ်မှပညာရေး ၀ န်ထမ်းများခန့်အပ်မည် (10 Personnel)
Zonguldak Bülent Ecevit တက္ကသိုလ်သည်ပညာရေးဝန်ထမ်းများကိုခန့်ထားလိမ့်မည်
Karamanoğlu Mehmetbey တက္ကသိုလ်သည်ပညာရေးဝန်ထမ်းများကိုခန့်အပ်လိမ့်မည်
Recep Tayyip Erdogan တက္ကသိုလ်သည်ပညာရေးဝန်ထမ်းများကိုခန့်အပ်လိမ့်မည်
ဝယ်ယူမှုအသိပေးချက် - အမျိုးသားရထားအတွက်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ (TÜVASAŞ)
21: ဇန်နဝါရီ 14 30 @ - 15: 30
တင်ဒါအသိပေးချက် - Mobile Repair and Maintenance Vehicle ကားများကိုဝယ်ယူလိမ့်မည်
22: ဇန်နဝါရီ 14 30 @ - 15: 30
တင်ဒါအသိပေးချက် - သစ်သားတံတား၊ သစ်သားလိုင်းနှင့်သစ်သားကတ်ကြေးဖြတ်ကူးတံတားများ
23: ဇန်နဝါရီ 14 30 @ - 15: 30
ယနေ့သမိုင်းတွင် - ၁၉၃၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက် - Istanbul Sirkeci ဘူတာ
၀ န်ကြီးဌာနမှအင်စတီကျူ့ -“ Istanbul သည်စမတ်မြို့အသုံးချမှုတွင်ပထမဆုံးနမူနာရုပ်သံလိုင်းဖြစ်သည်”
စမတ်မြို့ကြီးများနှင့်မြူနီစီပယ်ကွန်ဂရက်မှာ Istanbul Polemics Channel
Antalya မှ Alanya အထိမှတ်တိုင်အသစ် ၁၈ ခု
Altunizade Metrobus ဘူတာကိုချဲ့ထွင်ခဲ့သည်
Electricity Generation Inc. အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနလက်ထောက်စစ်ဆေးရေးမှဝယ်ယူလိမ့်မည်
Gendarmerie ၏အထွေထွေတပ်မှူး Procure Active Officer
Kocaeli City Hospital Tram Line ကို ၀ န်ကြီးဌာနမှပြုလုပ်လိမ့်မည်
«	ဇန်နဝါရီလ 2020 »
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - Ulukışla Yenice လိုင်းရှိ Platform ဖနောင့်ပေါ်တွင်ပျင်းစရာပုံများ
24: ဇန်နဝါရီ 10 00 @ - 11: 00
ဝယ်ယူရေးအသိပေးချက် - အခမဲ့စျေးကွက်မှတက်ကြွသောလျှပ်စစ်ကို ၀ ယ်ယူခြင်း
24: ဇန်နဝါရီ 14 00 @ - 15: 00
တင်ဒါအသိပေးချက် - တံတားများနှင့်တံတားများကိုအားဖြည့်ပေးခြင်း
27: ဇန်နဝါရီ 14 00 @ - 15: 00
28: ဇန်နဝါရီ 08 00 @ - 29: ဇန်နဝါရီ 17 00 @
28: ဇန်နဝါရီ 08 00 @ - 17: 00
တင်ဒါအသိပေးချက် - Tatvan ဆိပ်ခံတံတားညာလိုင်းလမ်းများပြန်လည်မွမ်းမံခြင်း
28: ဇန်နဝါရီ 09 30 @ - 10: 30
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: နွေဦးရာသီ Clamp Buy ပါလိမ့်မယ်
28: ဇန်နဝါရီ 10 30 @ - 11: 30
Akçayလေ့ကျင့်ရေးနှင့်အပန်းဖြေရန်နေရာ Block B တင်ဒါရလဒ်
DBM inရိယာ၌ 22 စောင်းနှင့် Hectometer ပြား
Arifiye Pamukova လိုင်းတွင် Underpass နှင့် Overpass Bridge တည်ဆောက်ခြင်း
ဆွီဒင် Varberg ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဒီဇိုင်းသည်တင်ဒါရလဒ်ဖြစ်သည်
UlukışlaBoğazköprüလိုင်း Km: 55 + 185
Bursa Eskişehir Bilecik ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီသည်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောဝန်ထမ်းများကိုငှားရမ်းမည်ဖြစ်သည်
လူမှု ၀ န်ဆောင်မှုဥပဒေ ၂၈၂၈ မှ TCDD တွင်ခန့်အပ်ထားသည့်ကိုယ်စားလှယ်များ၏အာရုံစူးစိုက်မှု
မြို့တော် ၅၃ မြို့မှ 53 ည့်သည်အယောက် ၉၀ ကို Erciyes Enter ည့်ခံခဲ့သည်
iz ည့်သည်အရေအတွက်နှင့်အတူစံချိန်တင်မှပြေး Denizli နှင်းလျှောစီးစင်တာ
မြို့တော်ဝန်Seçer -“ မက်ထရိုဟာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းသာမကဘဲမြို့တော်ကိုပြောင်းလဲစေမယ့်စီမံကိန်းတစ်ခုပါ။
ဒေသတွင်းကားများကသင့်ကိုနားထောင်သည်။ နားလည်သည်။ သင်ယူသည်
Ankara-Sivas YHT လိုင်းစမ်းသပ်မောင်းနှင်သည့်နေ့ရက်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်သည်
GSO ၏ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကChairman္ဌ Adnan Ünverdi
Ciat 2020 တွင်ပြသထားသော Fiat Concept Centoventi!
ပြည်တွင်းကားများကို CES 2020 Fair တွင်ပြသခဲ့သည်
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် IETT သည်ခရီးသည်များကိုတရုတ်လူ ဦး ရေနှင့်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်
Metro Istanbul ဝန်ထမ်းများသည်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့နိုင်ငံသားများဖြစ်သည်
ပထမဦးစွာ Hybrid ကိုလုပ်ငန်းသုံးယာဉ်တူရကီလမ်းမကြီးအတော်လေးထုတ်လုပ်!
Hyundai Motorsport 2020 WRC ရာသီအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ
KIA သည် ၂၀၂၀ တွင်အခွင့်အလမ်းများဖြင့်စတင်ခဲ့သည်
Halkalı Marmaray Gebze မြေပုံရပ်ပြီးပေါင်းစည်း Lines
Levent ÖZENမှဒီဇိုင်းထုတ်သည် မူပိုင်ခွင့်© Rayhaber | 2011-2020